Abiy Axmed maku saxan yahay inuu soo farogeliyo ismaamulka Somalida - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Abiy Axmed maku saxan yahay inuu soo farogeliyo ismaamulka Somalida
Abiy Axmed maku saxan yahay inuu soo farogeliyay ismaamulka Somalida dastuur ahaan ayadoo Itoobiya ku dhisan tahay dastuur qabiil oo la ansixiyay xilligii Tigreegu dalka haystey.
Tigreega ayaa dastuurkan sameeyay ayagoo ka fikiraya in axmaaradu ku tumato xaqooda maadaama ay ahaayeen qabiil ay ka tiro badan yihiin Oromada iyo Axmaarada.
Waxa saaka ka dhacay Jigjiga ayaan ahayn wax dastuur ku dhisan waayo ma Jiro wax isbedel oo lagu sameeyay madaxa maamulka oo keeni karta amar diido ama la faafiyay. Ma cada in dawlada dhexe xaq u leedahay inay bedesho maamulka.
Ilaa hadda waxa ka socda Jigjiga waxay noqon karaan wax ka fog nidaamka jira ee lagu heshiiyay. Lama sheegin in ismaamulkani ku Jiro xukun deg dega.
Warar ayaa sheegaya in madaxii maamulka Cabdi Maxamuud Cumar loo gudbiyay Addis ababa, taas lafteeda ayaa ah dastuur jabin.
Haddii Abiy Axmed sidan ku bilaabo xukunkiisa muxuu uga duwan yahay Tigreegii Sanaawi iyo kii ka dambeeyay ee cadaadinta ku hayay Somalida joogta Somali galbeed ee iyagu kilinka ula baxeen.
Cabdi Maxamuud Cumar ayaa lagu haystey inuu jirdil ku sameeyay Somali badan asagoo cadowgiisa ka dhigtey Somali taas oo ka dhigan inuuna hadda heli Karin cid Somalinimo ku taageerta, haday jiraanba.
Ururada uu sameeyay ayaa waxa ka mida Heego oo iyagu dadka mucaaradka ah ee Somalida ah ka caayi jirey idaacadiisa.
Booliiska loo yaqaan Liyu Booliis ayaa sidey doonaan kuula dhaqmi-jirin inkastoo dadka qaar leeyihiin Somalida sidaas kaliya ayay wax ku maqlaan hadana waxa jirey kaysas ka baxsan Islaamninada oo ay fuliyeen.
Waxa lagu amaanay Cabdi Maxamuud la dagaalanka tuugada argagixisada oo ku soo dhici waayay inay Somalida galbeed cago gashaan.
Isku soo wada duuboo waxa Abiy Axmed arkey oo ka faaiideystay xaaladaha ku gadaamnaa Cabdi Maxamuud Cumar waana ta uu ku jeclaystey inuu ciidankiisa soo geliyo Jigjiga magaaladana Khalkhaliyo.
Hadii sidan loogu tunto dastuurka qabiileysan ee Itoobiya waxay noqonaysaa qoomiyad qoomiyad kale ku tumanaysa xataa haddii madaxii ismaamulka uu ku kacay xadgudubyo aanu fulin Karin haddii uuna ka haysan ogolaansho Itoobiya.
Waxa faaladan qorey Maxamed Yuusuf